I-China i-8921 yokusebenza okuphezulu kwe-polyurethane sealant manufacturers kunye nabathengisi | IsiHuiti
I-8921 yokusebenza okuphezulu kwetywina yetywina
I-8921 yokusebenza okuphezulu kwetywina yetywina yinto enye, i-thixotropy ephezulu, ayihambi, ivumba eliphantsi le-polyurethane. Imveliso i-viscosity ephantsi, i-thixotropy efanelekileyo, efanelekileyo kwi-gluing manual. Ukuncamathela okunyangiweyo zi-elastomers, anti-kubanda kunye notshintsho olushushu, ukumelana okuhle noxinzelelo lotshintsho kwintsebenzo. Ingapeyintwa, ikhazimliswe, akukho mhlwa, ukuphakama kunye nolwakhiwo oluphezulu aluhambi. Kukho ukunamathela okubanzi kwimigca eyahlukeneyo.
Tywina umoya webhasi, i-weld, imithwalo kunye nezinye izinto. Yenza iinqanawa, ii-locomotives, ulwakhiwo, ipeyinti kunye namanye amashishini kunye nokunye ukusetyenziswa kwamandla ebhondi ephantsi.
* Izinto eziluncedo:
I-viscosity ephantsi, i-thixotropy elungileyo: isincamathelisi sinokusetyenziselwa uninzi lwemipu yesandla okanye yomoya.
Ukukhuselwa kwendalo esingqongileyo: akukho livumba.
Amandla okudibanisa aphezulu.
Ukuxhathisa ngokuchasene nokwaluphala.
Gqibezela izisombululo zemveliso: uthotho lwemveliso yazo zonke ivenkile zomsebenzi zemoto.
* Inkxaso yeTekhnoloji:
Inkampani yethu ineetekhnoloji eziphezulu ezininzi ezinokuphendula zonke iintlobo zemibuzo kwinkqubo yokusebenzisa iimveliso ezikwi-Intanethi. Kwangelo xesha, sinikezela ngeseti epheleleyo yezisombululo zokubambelela kwimoto kubathengi. Ukuba kukho imfuneko, inkampani yethu iya kuthumela amagcisa kwindawo apho abathengi basebenzise iimveliso ukusombulula iingxaki kubathengi.
I-Weeton 823A / 828B Amalungu amabini e-PU pack eguqukayo ...
I-Weeton 728 yamacandelo amabini e-PU ukubopha okuguqukayo ...